MADAXWEYNE FARMAAJO JAGADA MA SOO XADAY? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA MADAXWEYNE FARMAAJO JAGADA MA SOO XADAY?
MADAXWEYNE FARMAAJO JAGADA MA SOO XADAY?
M/weyne Farmaajo markaad u fiirsato hab-dhaqankiisa iyo sida uu u maamulo howlaha laga filaayo oo ay fareyso jagada Madaxweyne, marka faaqidaad lagu sameeyo waxaa kuu soo baxaya inuu u dhaqmayo sidi qof jagada la dhuumanaya oo la moodo inuu soo xaday ama sharci darro ku yimid meesha.Taas waxaa markhaati ka ah inuusan marna ka hadlin ama ka soo muuqan meelaha laga filaayo inuu Madaxweyne dal soo fara geliyo ugana hadlo sida ku habboon, kana qaado tallaabo u qalanta darajada ay xambaarsan tahay jagada.
Inkastoo shaqada Madaxweynaha ay tahay waxa loogu yeero ”cerimonial” ama talyaaniga ku tahay ”simboleggia per la nazione” haddana waxaa looga bartay Madaxa dalka Somaliya inuu wax kasta ku shaqo leeyahay oo ay shacabkuna ka sugaayaan inuu u dhaqmo sidi qof awooda oo dhan ay gacantiisa ku jirto, waana si ka duwan sida Dustuurku dhigaayo. Haddaba, si dadweynaha loogu baraarujiyo Madaxweynaha wuxuu la mid yahay Madaxweynaha Talyaaniga, kan Ethiopia, kan Yahuuda oo intaas oo dhan iyo qaar kale waxaa la isku yiraahdaa ”Sistema Stato Unitario”.
Annaga markaad fiiriso dhaqankeena waxaad arkeysaa in shaqadi oo dhan uu isku fuuqsaday Xafiiska Madaxweynaha oo wax walba isaga laga sugaayo..aaway shaqadi sharciyan uu lahaa R/Wasaaraha. Xasan Kheyre waxaad moodaa in Madax Goboleedyada ay isaga ka sareeyaan..alla yow sheega inuu isagu ka weyn yahay!!!
Dhacdooyin isdaba joog ah ayaa ka socda dalka oo qaarkood ay halis ku yihiin jiritaanka Somaliya. Waxaan maanta adduunka ugu muuqannaa dad isdaba yaacaya oo ninba meel wax u wado, waxaana maqan tansiiq iyo wada shaqeynti laga filaayay dowlad federaal ah oo go’aanada iyo fulintooda meel kaliya laga maareeyo, taasoo la rabay inay ahaato dowladda dhexe ee uu Farmaajo madaxa ka yahay iyo R/wasaare Kheyre.
M/weyne Farmaajo wuxuu u muuqadaa nin ka mid ah madaxweynayaasha dalka ka jira, iyadoo mid waliba oo iyaga ka mida uu adduunka la xariiro isagoo ku doodaya inuu gobolkiisu la leeyahay dowladaha qaarkood xariir ganacsi iyo heshiiyo laba geesood ah oo aysan Somalida Farmaajo Madaxweynaha ka yahay ku jirin Waa kaa C/weli Gaas ku andacoonaya inuu cilaaqaad gaar ah la leeyahay Imaaraatka iyo Sacuudiga isagoo ilaalinaya danta Puntland.
Dhinaca kale Shariif Xasan wuxuu xiriir gaar ah la leeyahay Imaaraatka oo u soo diray shirkad aduunka oo dhan uu ka qayliyay ee la yiraahdo Black Water oo Mareynaknki laftiisi ka cararay oo xariirki u gooyay kuna tilmaamay urur argagixiso ah. Waa maxay howsha ay ka qabaneyso Black-Water gobolka Koofur-Galbeed?
Dowladda Imaaraatka waxay adeegsaneysaa ruux kasta si ay danaheeda u fushato, waxayna hubsatay inay Somalidu yihiin kuwa rakhiisan ee la addeegsado..Waxay gaareen heer ay soo diraan Siilaanyo oo ergay u soo diray Xamar si uu u oggolaado in Qadar cilaaqaatka loo gooyo. Intaas kuma ekaan Wuxuu kaloo adeegsaday dowladda Masar oo M/weyne Farmaajo martiqaaday si ay uga dhammeyso arrimaha ay wataan dalalka ku kacsan Qadar. Maanta Masar waxay noo ballanqadeysaa taageero been-abuur ah oon midna ka fuleyn, balse ay rabaan in Somaliya ay ku soo biirto wadamadaan khaldan oo adduunka isku ceebeeyay.
Imaaraatka waxay sabab u naqan doontaa burburki Somaliya ugu weynaa kaas oo ka khatarsan kii aan soo marnay, waana maalinta ay ku guuleysato inay Maamul Goboleedyada ay ka go’aan dowladda dhexe mid walibana iskiis isu taago. Yaa khatartaas dareemi kara oo dalkaan ka badbaadi kara khatarta naloo maleegaayo iyadoo la adeegsanayo siyaasiyiin aan wadaninnimo ku jirin oo aad rakhiis u ah, haddana isla fiicaan oo zaciim is-mooda.
M/Weyne farmaajo arrimahan socda waad aragtaa waana la socotaa khiyaanada lagu tirtiraayo jiritaanka Somaliya loona adeegsanaayo madaxweyne-ku-sheeg maangaab ah. Waxaan ku weydiisaneynaa inaad ka hadasho arrimaha dhacaya muujisana kalsooni iyo geesinnimo aad uga hortagto khatarta soo socota oo meel dhaw noo soo jirta intey goori goor tahay. Ku adkey Madaxda gobollada inuusan miudkoodna xariir la yeelan Karin dal kale, kii ku adkeystana tallaabo cad uu ka qoomameeyo laga qaadi doono.